Yintoni i-Deed eLieu yokuTyhilwa eNew York? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
Yintoni i-Deed eLieu yokuTyhilwa eNew York?
ikhaya / Yintoni i-Deed eLieu yokuTyhilwa eNew York?
Ngaba uyazibuza ukuba i-Deed kuLieu yokuTyhilwa isebenza njani eNew Jersey?
Cash yezitshixo eNew Jersey okanye ngakumbi "Isenzo eLieu yokuBhencwa”ENew York kulapho umnini-khaya enika umzi wakhe ebhankini endaweni yokujongana nokuphawulwa. Oku kubizwa ngokuba "kukuKhutshwa kwemali mboleko" ngamanye amabhanki kuba ayakukhulula kwimali mboleko yakho ukuze utshintshele izitshixo zekhaya lakho kunye nawo onke amalungelo onawo kwaye abayi kuqhubeka enkundleni ukuba banikezele ngawe.
Itayitile endaweni yoko ngamanye amaxesha inika izibonelelo kubaninimzi nakwibhanki, kodwa ngamanye amaxesha isivumelwano siba kwicala elinye. Ukuba ubuninzi bokulingana ekhayeni lakho, ibhanki iza kuwa ngasemva ukuze isebenze nawe kuba ngokusisiseko ubanika imali yasimahla. Ukuba awunabulungisa kwikhaya lakho, ibhanki inokukwenza ukuba uzame ukuthengisa ikhaya ngexabiso elipheleleyo lekhaya lakho okanye uzame ukwenza "iThengiso elifutshane" ngaphambi kokwamkela itayitile endaweni. Njengombolekisi, izibonelelo zingabandakanya ukukhutshwa kulo lonke ityala kwikhaya kunye nokuphepha ukubekwa ibala kwirekhodi lakho, nangona kunjalo, ibhanki isenokuzama ukufumana ubuqhetseba ngokuchasene nombolekisi ngomehluko abawuthengisayo ekugqibeleni ikhaya kunye nento etyalwayo. Qinisekisa ukuba uyakufuna ukwenza itayitile endaweni yoko yeyona nto unokukhetha kuyo.
Kuthekani ukuba kukho i-NJ TAX LIEN okanye uBambiso lwesiBini? Ngaba umsebenzi uza kusebenza?
Ukuba kukho naziphi na iimali ezibolekayo okanye imali mboleko yesibini kwindlu ye-NJ ibonakaliswe itayitile endaweni yoko kunokuba ngumtsalane kumbolekisi. Iibhanki ezininzi kunye nababolekisi baqinisekisa ukuba irhafu kamasipala ihlawulwe, kodwa oku akusoloko kunjalo. A isatifiketi sentengiso e-NJ inokuphelisa umnini wamalungelo okuqala ukubanjwa, ngenxa yoko le yimeko enzima yokuba ibhanki ibekho. I-bhanki ayinakufuna ukuthwala uxanduva lwamatyala amancinci kumnini wepropathi ngaphandle kokuba banakho. hlawula amatyala kwiingeniso zokuthengisa ikhaya. Ibhanki inokuxela kwangaphambili ukuze ikwazi ukucoca itayitile ngenkqubo yokubonisa iNW. Nangona kunjalo, oku kunokuba sisikhundla kuwe njengomntu obolekayo ukuba uthethathethwano kunye nebhanki yakho kunye nababambisi abancinci bokugcina ityala ukunciphisa ityala olityala ngokuhlawula imali engaphantsi kwetyala lakho.
Ukwenzela ukuthathwa njengethala lencwadi endaweni yokuba waziwe, wena kunye nebhanki yakho kunye nabanini babanini junior kufuneka ningene kwintengiselwano. ngokuzithandela nangaphakathi ukholo olungileyo. Ngenxa yemfuno yokuba oku kufuneka kube ngokuzithandela, iibhanki azisayi kuvuma i-tyala endaweni yokuboniswa kwangaphambili e-NJ ngaphandle kokuba ifumene isithembiso esibhaliweyo sothunyelo-zimali esivela kulowo obolekayo esichaza ngokucacileyo ukuba unikezelo lokungenela uthethathethwano lwenziwa. ngokuzithandela ngumbolekisi. Nokuba obolekayo okanye obolekayo akunyanzelekanga ukuba aqhubeke netayitile endaweni yokuba ade afikelele kwisivumelwano sokugqibela kwaye akanakunyanzelwa ukuba axhase umbono wento endaweni.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, kubalulekile ukuba uthethe negqwetha elinokukunceda uqonde ukhetho lwakho ngeli xesha ukuba ucinga ngokuyeka ikhaya lakho. Ukukhusela i-asethi yenombolo yakho yosapho yinto esinokukunceda ngayo. Nxibelelana nathi namhlanje, kwaye siza kudlula zonke iinketho zakho. Nxibelelana nathi kwi (973) 200-1111 okanye usithumelele i-imeyile [Imeyile ikhuselwe]
Igama (ElokuQala nelokuGqibela) *
Sinokukunceda njani? *